🥇 सिलाई उत्पादनको लेखा स्वचालन
तपाइँ तपाइँका सबै प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुनेछ: info@usu.kz
के तपाई प्रोग्राम किन्न चाहानुहुन्छ?
तपाईंसँग प्रश्नहरू छन्?
रेटिंग: 4.9. संगठनहरूको संख्या: 571
अपरेटिंग प्रणाली: Windows, Android
कार्यक्रमहरूको समूह: USU software
सिलाई उत्पादनको लेखा स्वचालन
ध्यान दिनुहोस्! तपाईं आफ्नो देश वा शहर मा हाम्रो प्रतिनिधि हुन सक्छ!
तपाइँ मताधिकार सूची मा हाम्रो मताधिकार को विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ: मताधिकार
हामी हाम्रो देश मा तपाइँको सामान वा सेवा प्रतिनिधित्व गर्न को लागी तयार छौं।
सिलाई उत्पादनको लेखा स्वचालनको भिडियो
यो भिडियो तपाईंको आफ्नै भाषामा उपशीर्षकहरूको साथ हेर्न सकिन्छ।
डेमो संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्
कार्यक्रम सुरू गर्दा, तपाइँ भाषा चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
जाभास्क्रिप्ट बन्द छ
तपाईं एक पटक मात्र भुक्तान गर्नुहोस्। कुनै मासिक भुक्तानी छैन!
एकल प्रयोगकर्ता कार्यक्रम
नि: शुल्क टेक्निकल समर्थन घण्टा
प्राविधिक सहयोगको अतिरिक्त घण्टा
सिलाई उत्पादनको लेखा स्वचालनको अर्डर गर्नुहोस्
सिलाई उत्पादन लेखाको स्वचालनले व्यवसाय मालिकहरू र ateliers को जीवन सरलता गर्दछ र तिनीहरूलाई समयको साथ राख्न अनुमति दिन्छ। युएसयू निस्सन्देह स्वचालन कार्यक्रमहरूको बीचमा एक नेता हो र ध्यान पाउन योग्य छ। हाम्रो उपयोगिता यस्तो बनाइएको छ कि कुनै पनि उपयोगकर्ता सहजै सिलाई स्वचालन को आधारभूत मा गहिरो बिना मा यो बाहिर आंकडा गर्न सक्छन्। र यसको मुख्य फाइदा तथ्यमा छ कि अब सिलाई उत्पादनको मशीनीकरण र स्वचालन एक उच्च, गुणात्मक तहमा गरिन्छ। हामी बुझ्दछौं कि, सबैभन्दा पहिले, विशेष सफ्टवेयरले प्रयोगकर्तालाई व्यवस्थापनको सहजता र बुझ्ने क्षमतामा आकर्षित गर्नुपर्दछ, कार्यक्रममा काम गर्ने आधारभूत कुराहरू सिक्न धेरै समय लिनुहुँदैन, विभिन्न प्रकारका कार्यहरू गर्नुपर्दछ, तर समानमा समय सरल हुन। 1C मा सिलाई उत्पादन लेखा को स्वचालन अब एक सामान्य घटना हो। तर के तपाइँको कम्पनीलाई वास्तवमै यो जटिल प्रोग्रामको आवश्यकता छ जसमा धेरै सेटि settingsहरू आवश्यक पर्दछ, विशेषज्ञहरूबाट निरन्तर समर्थन र सबै कर्मचारीहरूको अनिवार्य प्रशिक्षण चाहिन्छ? स्पष्ट रूपमा माथिका सबैको लागि निरन्तर आधारमा लागत आवश्यक पर्दछ, जबकि हाम्रो लेखा प्रणालीको खरीदले संचालनको सम्पूर्ण अवधिभरिमा कुनै सदस्यता शुल्क बुझाउँदैन, र कोहीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछ - विक्रेताबाट लेखाकारसम्म। कठिनाइहरू पार गर्न आवश्यक छैन, यो एक विश्वव्यापी प्रणालीको पक्षमा छनौट गर्न पर्याप्त छ जसले तपाईंलाई गम्भीर वित्तीय र स्रोत लागत बिना उत्पादन प्रक्रिया अनुकूलन गर्न अनुमति दिन्छ।
सिलाई उत्पादन सधैं मल्टिस्टेजमा आधारित हुन्छ। तसर्थ, यसको स्वचालन मुख्य रूपमा यसको सबै चरणहरूमा कुल नियन्त्रण को लक्ष्य लाई पछ्याउँछ। यसले तपाईंलाई वास्तविक तस्वीर हेर्न र यसको आधारमा तपाईंको व्यवसायमा कुनै पनि समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ। एकै समयमा, लेखा दुवै एक उद्यम भित्र र शाखाको नेटवर्क मार्फत गर्न सकिन्छ, इन्टरनेट मा सरल डाटा तुल्यकालन प्रयोग गरेर। सिलाई व्यवसायमा, यो विशेष गरी सत्य हो, किनकि कामका सबै चरणहरू, एक नियमको रूपमा, बिभिन्न कर्मचारीहरूमा वितरण गरिन्छ। यदि तिनीहरू सबै स्वचालित प्रणालीमा काम गर्छन् भने यसले निरन्तरता सुनिश्चित गर्दछ, कुनै त्रुटिहरू हटाउँछ, र सबै कार्यहरूको पारदर्शिता पनि सुनिश्चित गर्दछ।
सिलाई उत्पादन लेखाको मेकानिकीकरण र स्वचालनको व्यवस्थापनको हाम्रो अनुप्रयोग एकै साथ ग्राहक र आपूर्तिकर्ताहरूको आधार बन्छ, यसले सामग्री र सामानहरूको लेखा राख्न र शेयरको आवश्यक स्तर गणना गर्न, श्रमिकहरूको क्रियाकलापको अनुगमन गर्न, उनीहरू बीच अर्डर वितरण गर्न मद्दत गर्दछ, श्रम दक्षता मूल्यांकन। यसको आधारमा, तपाईं जडान गर्न र थप व्यापारिक उपकरणहरू प्रयोग गर्न, क्यासियरको कार्यस्थल स्वचालित रूपमा, रसिदहरू र लागतहरूको वित्तीय लेखा राख्ने, debणदाताहरूको साथ काम गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
तपाईंको सिलाई ईन्टरप्राइजको मशीनीकरणको उत्पादकत्वको मूल्या assess्कन गर्न, रिपोर्टहरूको साथ काम गर्ने कार्य उपयोगी छ: तिनीहरू कुनै पनि सूचकहरूको आधारमा गरिन्छ, र सबै जानकारी तपाईंको लागि दृश्य रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ: तालिकाहरू, ग्राफहरू, रेखाचित्रहरू।
उही समयमा, सिलाई उत्पादन स्वचालन कार्यक्रमको लेखा ग्राहक सेवामा काम गर्नको लागि पनि एक शक्तिशाली उपकरण हो: एक इलेक्ट्रोनिक ग्राहक आधार, कागजात फारमहरूको स्वचालित मुद्रण, अर्डरको तत्परताको सूचना वा यसको कार्यान्वयनको चरणहरू, पदोन्नतीहरू र प्रस्ताव, छूट र मूल्य सूचि को निजीकरण।
हाम्रो उपयोगिताले मात्र काम गर्दैन, तर प्रत्येक ईन्टरप्राइजेजको विशेषताहरु लाई ध्यानमा राख्छ, अनुकूलन, विशेष गरी सिलाई ब्यापारमा, शुरुवातदेखि नै यसको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्दछ।
तल USU सुविधाहरूको एक छोटो सूची छ। सम्भावितहरूको सूची विकसित सफ्टवेयरको कन्फिगरेसनमा निर्भर रहन्छ।
प्रोग्रामको सजिलो स्थापना, द्रुत सुरूवात, कम्प्युटरको प्रणाली डेटामा undemandingness;
स्वचालनमा काम गर्न अनुकूलन गर्न समय न्यून छ; तपाईं सफ्टवेयर बुझ्नुहुन्छ र मात्र एक दिनमा स्वचालन प्रक्रिया सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ;
धेरै अन्य प्रकारका अनुप्रयोगहरू भन्दा फरक, युएसयूलाई स्थिर भौतिक लगानीको आवश्यकता पर्दैन; तपाईं विकल्पहरूको पूर्ण दायराको साथ प्रोग्राम खरीदको लागि मात्र भुक्तान गर्नुहुन्छ;
सिलाई प्रक्रियाहरूको स्वचालन र मशीनीकरणले तपाईंलाई उत्पादन निगरानी गर्न अनुमति दिन्छ;
स्वचालनले तपाईंलाई इलेक्ट्रॉनिक कागजात प्रवाह स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ;
अनुप्रयोग प्रयोग गरेर, तपाईंले गोदाम आन्दोलनहरूको सूची र निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ;
तैयार कपडाको उत्पादनको विश्लेषणले कर्मचारीहरूको गतिविधिमा सुधार ल्याउँछ; उनीहरूको कामको समय अझ सक्षमतासाथ वितरण गर्नुहोस्;
कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता स्पष्ट रूपमा जिम्मेवारीका क्षेत्रहरूमा विभाजित हुन्छ;
प्रत्येक कर्मचारीको स्थिति र अधिकारको आधारमा फरक पहुँच अधिकार हुन सक्छ;
मोड्युलहरू प्रत्येक कर्मचारी द्वारा कार्यको कार्यान्वयन समय छुट्टै रेकर्ड गर्दछ;
कर्मचारी तालिका गठन गरिएको डाटाको आधारमा गठन गरिएको छ, प्रति घण्टा वा पीकवर्क ज्याला गणना गरिन्छ;
उत्पादन शाखाहरूको कार्य सिnch्ख्रोनाइज गरिएको छ; कर्मचारीहरू बीचको अन्तरक्रियाको संयन्त्र डिबग हुन्छन्;
सिलाई उत्पादन लेखा अनुप्रयोगको स्वचालनले सजिलैसँग जानकारीको ठूलो मात्रामा प्रक्रिया गर्न र धेरै कार्यहरू गर्न सक्षम छ;
इलेक्ट्रोनिक गर्न योजनाकार सेट अप गर्न धेरै नै सजिलो छ, साथ साथै एउटा सूचना र रिमाइन्डर प्रणाली;
रिपोर्टहरू स्वचालित रूपमा उत्पन्न गर्न सकिन्छ केवल इच्छित तालिका र आफ्नो मापदण्डहरू सेट गरेर;
एप्लिकेसनले भरपर्दो भण्डारण र सबै महत्वपूर्ण जानकारीको समयमै प्रतिलिपि प्रदान गर्दछ;
सिलाई ईन्टरप्राइजको सबै शाखा र उपविभागहरू एकल परिसरमा व्यवस्थित छन्, जबकि तिनीहरूको कार्यक्षमता स्पष्ट रूपमा वर्णन गरिएको छ;
उत्पादन लेखांकनको स्वचालनमा डेटाको विश्लेषण एक निरन्तर आधारमा गरिन्छ, प्रत्येक रिपोर्ट कुनै पनि समय र परिणामहरूको आधारमा कुनै पनि सूचकको सन्दर्भमा उत्पन्न गर्न सकिन्छ।
अपीलको प्रकार *प्रोग्राम किन्नुहोस्एउटा प्रस्तुतीकरण अनुरोध गर्नुहोस्प्रश्न सोध्नुडेमो-संस्करणको साथ मद्दत गर्नुहोस्
सन्देश पठाउन सकिएन। फेरी प्रयास गर्नु होला।
सन्देश सफलतापूर्वक पठाइयो! तपाईको अनुरोधका लागि धन्यबाद! निकट भविष्यमा, तपाई पक्का उत्तर दिनुहुन्छ।
हामी छिट्टै अनलाइन हुनेछौं . यस बीचमा, हामीलाई मेल द्वारा एक सन्देश पठाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
प्रत्येक संगठन को लागी
कामको समयको नियन्त्रण
ग्राहक डेटाबेस को लागी कार्यक्रम
आदेश लेखा को कार्यक्रम
व्यापार र गोदाम
पसलको लागि कार्यक्रम
एक फूल पसल को लागी कार्यक्रम
कमिशन ट्रेडिंगको लागि प्रणाली
भाँडाको लागि कार्यक्रम
गोदामका लागि कार्यक्रम
आपूर्ति प्रक्रिया लेखा
उत्पादन र उत्पादनहरू
उत्पादनको लागि कार्यक्रम
कृषिका लागि कार्यक्रम
फार्म को लेखा
मुद्रा विनिमयको लागि कार्यक्रम
प्यान्डशपको लागि कार्यक्रम
लघुवित्त संगठनहरूका लागि कार्यक्रम
नेटवर्क मार्केटि forका लागि सफ्टवेयर
क्लिनिकको लागि कार्यक्रम
दन्तचिकित्साका लागि कार्यक्रम
एक फार्मेसी को लागी कार्यक्रम
अप्टिक्स को लागी कार्यक्रम
पशु चिकित्सा को लागी कार्यक्रम
प्रयोगशालाको लागि कार्यक्रम
ब्यूटी सैलुनका लागि कार्यक्रम
ग्रुमिंग सलुनका लागि कार्यक्रम
Ateyer को लागी कार्यक्रम
खेल र मनोरन्जन
खेलकुदका लागि कार्यक्रम
नृत्य विद्यालयको लागि कार्यक्रम
एक मनोरन्जन केन्द्र को लागी कार्यक्रम
एन्टि क्याफेको लागि कार्यक्रम
क्लब नियन्त्रण को लागी कार्यक्रम
सौना को लागी कार्यक्रम
कार र वितरण
कार सेवा को लागी कार्यक्रम
रसदको लागि कार्यक्रम
व्यक्तिहरूको लागि सेवाहरू
उपयोगिताहरूको लागि कार्यक्रम
विद्यार्थीहरूको लागि कार्यक्रम
अनुवाद एजेन्सीका लागि सफ्टवेयर
सुक्खा सफाईको लागि कार्यक्रम
प्रिन्टि house हाउसका लागि कार्यक्रम
एक विज्ञापन एजेंसी को लागी कार्यक्रम
सेवा केन्द्रका लागि कार्यक्रम
निजी सुरक्षा कम्पनी को लागी कार्यक्रम
हामीसँग सय भन्दा बढी प्रोग्रामहरू छन्। सबै कार्यक्रम अनुवाद गरिएको छैन। सफ्टवेयरको विकास यहाँ तपाईं सफ्टवेयरको पूर्ण सूची हेर्न सक्नुहुन्छ
Ateiler र टेलरिंग
सिलाई स्टूडियोको लेखा स्वचालन
सिलाई कार्यशाला को लागी लेखा
कपडा उत्पादन को लागी लेखा
टिश्यू प्रयोगको लागि लेखा
सिलाई कार्यशालामा लेखा
अटेलर ग्राहकहरूको लेखा
Ateiler अर्डर को लेखा
सिलाई गर्दा ग्राहकहरूको लेखा
सिलाई उत्पादनमा लागतको लेखा
कपडा उद्योगमा लागतको लेखा
अटेलरमा कपडाको लेखा
कपडा उत्पादन मा सामग्री को लेखा
सिलाई गर्दा अर्डरको लेखा
कपडा उत्पादन को लेखा
टेलरिंग को लेखा
कपडाको टेलरिंग र मर्मतको लेखा
फेशन हाउसको लेखा
दर्जी पसलका लागि लेखा कार्यक्रम
सिलाई कार्यशाला को लागी लेखा कार्यक्रम
Ateyer को लागी लेखा प्रणाली
परिधान कारखाना कार्यक्रम
कपडा उत्पादनमा लेखाको लागि अनुप्रयोग
Ateiler को लागी अनुप्रयोग
फेशन हाउसका लागि अनुप्रयोग
सिलाई उत्पादनको लागि अनुप्रयोग
सिलाई कार्यशालाका लागि अनुप्रयोग
Ateyer लेखा आवेदन
Ateyer स्वचालन कार्यक्रम
Ateyer स्वचालन प्रणाली
Ateyer नियन्त्रण प्रणाली
अटेलरको लेखाको स्वचालन
सिलाईको लेखाको स्वचालन
स्वचालन सिलाई उत्पादन
सिलाई उत्पादनको स्वचालन प्रणाली
सिलाई उत्पादनको लागि ग्राहक आधार
कपडा सिलाई स्वचालन
कपडा उत्पादन व्यवस्थापन
सिलाई उत्पादन को जटिल स्वचालन
सिलाई उत्पादनको लागि कम्प्युटर प्रोग्राम
अटेलरमा नियन्त्रण गर्नुहोस्
कपडा सिलाई को नियन्त्रण
सिलाई को नियन्त्रण
सिलाई कार्यशालाको नियन्त्रण
सिलाई उत्पादन को कार्य तालिका को नियन्त्रण
Ateiler को लागी CRm
कपडा उत्पादनका लागि सीआरएम
सिलाई उत्पादनको लागि प्रोग्राम डाउनलोड गर्नुहोस्
अटेलरका लागि प्रोग्राम डाउनलोड गर्नुहोस्
फेसन घर स्वचालन
फेशन हाउस कन्ट्रोल
सिलाई उत्पादनमा पूर्वानुमान र योजना
कपडा उत्पादन मा पूर्वानुमान
दर्जी पसलका लागि नि: शुल्क कार्यक्रम
गारमेन्ट उद्योग व्यवस्थापन
अटेलरमा ग्राहकहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने
अटेलरमा कसरी रेकर्ड राख्ने
अटेलरका लागि सूचना प्रणाली
कपडा उत्पादन को सूचना
कपडा उत्पादन मा लेखा व्यवस्थापन
अटेलरको लागि व्यवस्थापन
सिलाई कार्यशाला को लागी व्यवस्थापन
सानो सिलाई उत्पादनको व्यवस्थापन
फेसन हाउसको व्यवस्थापन
सिलाई उत्पादन को व्यवस्थापन प्रणाली
कपडा उत्पादन को अनुकूलन
सिलाई उत्पादनमा संगठन र योजना
कपडा उत्पादन मा लेखा को संगठन
अटेलरमा व्यवस्थापनको संगठन
सिलाई उत्पादन मा काम को संगठन
Ateyer को काम को संगठन
सिलाई उत्पादनमा योजना गर्दै
कपडाको टेलरिंगको उत्पादन नियन्त्रण
सिलाई कार्यशालाको उत्पादन नियन्त्रण
टेलरिंग को लेखा को लागी कार्यक्रम
सिलाई उत्पादनमा लेखाको लागि कार्यक्रम
Ateyer नियन्त्रण को लागी कार्यक्रम
कपडा टेलरको लागि कार्यक्रम
सिलाई उत्पादन नियन्त्रणको लागि कार्यक्रम
सिलाई कार्यशाला नियन्त्रणको लागि कार्यक्रम
कपडा कारखानाका लागि कार्यक्रम
कपडा सिलाई व्यवस्थापनको लागि कार्यक्रम
दर्जी पसलको व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम
सिलाई उत्पादनको व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम
सिमस्ट्रेसका लागि कार्यक्रम
सिलाई को लागी कार्यक्रम
सिलाई व्यवसाय को लागी कार्यक्रम
सिलाई उत्पादनको लागि कार्यक्रम
कपडा उद्योगका लागि कार्यक्रम
कपडा व्यवसाय को लागी कार्यक्रम
फेशन हाउसका लागि कार्यक्रम
कपडाको उत्पादनका लागि कार्यक्रम
फेशन को सैलुन को लागी कार्यक्रम
सिलाई उद्यमको लागि कार्यक्रम
सिलाई उद्योगका लागि कार्यक्रम
सिलाई कार्यशालाका लागि कार्यक्रम
दर्जीका लागि कार्यक्रम
टिश्युको लागि खातामा प्रोग्राम
सिलाई लेखा कार्यक्रम
सिलाई ateiler स्वचालन प्रणाली
सिलाई व्यवसाय सफ्टवेयर
सिलाई नियन्त्रण कार्यक्रम
सिलाई उत्पादन नियन्त्रण
सिलाई उत्पादन व्यवस्थापन
सिलाई पसल नियन्त्रण प्रणाली
सिलाई कार्यशाला स्वचालन
सिलाई कार्यशाला सफ्टवेयर
अटेलरका लागि सफ्टवेयर
सिलाई उत्पादनको लागि सफ्टवेयर
सिलाई उत्पादनको लागि प्रणाली
अटेलरका लागि प्रणाली
सिलाई स्टुडियोको लागि प्रणाली
सिलाई कार्यशालाका लागि प्रणाली
फेशन घरको लागि तालिकाहरू
अटेलरका लागि तालिकाहरू
सिलाई उत्पादनको लागि तालिकाहरू
टेलरिंग कार्यशाला कार्यक्रम
Ateiler कामका लागि के आवश्यक छ
नयाँ सफ्टवेयर अर्डर गर्नुहोस्